Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany - WoW Guides | WoW Guides
Ireo mpitrandraka manangona akora isaky ny zoron'i Azeroth, mamakivaky tendrombohitra sy lohasaha mamoaka ireo mineraly sarobidy indrindra.
Ady ho an'ny torolàlana momba ny harena ankibon'ny tany azeroth: lalam-pambolena tsara indrindra
Aloha! Amin'ity torolàlana momba ny harena ankibon'ny tany ity ho an'ny Azeroth dia hasehonay anao ny làlana tsara indrindra hiompiana amin'ny sari-tany ...
Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany Azeroth
Salama daholo. Androany aho mitondra aminao ny vaovao sasany momba ny asa momba ny harena ankibon'ny tany ao Battle for Azeroth. Raiso ny ...
Torolàlana momba ny harena ankibon'ny legiona - Teknika sy vaovao rehetra
ny Luis Cervera hace 6 taona .
Tsara! Manohy amin'ny asa izahay. Anjarantsika ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany Legion. Ity asa fanangonana ity dia mitondra vaovao maro ...
Draenor Mining Guide 1-700 Nohavaozina 6.2
Aloha! Tongasoa eto amin'ny torolàlana Draenor Mining izay hanampianay anao hahatratra ny ambaratonga 700.
Torolàlana momba ny harena ankibon'ny tany 1-600
Ity torolàlana ity dia hampianatra anao ny fomba haingana sy mora indrindra hampitomboana ny asanao momba ny harena ankibon'ny tany manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 600. Ny harena ankibon'ny tany dia manatanteraka asa telo: ny mpanefy vy, ny injeniera ary ny firavaka, ka tena tsara ny mampiaraka azy ireo amin'izy ireo.
Torolàlana momba ny harena ankibon'ny tany 1-450
ny Naini hace 13 taona .
Amin'ity torolàlana ity dia ho fantatrao ny fomba haingana indrindra hampiakarana ny asanao momba ny harena ankibon'ny tany manomboka amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 525. Manantena izahay fa hahasoa anao io.
Ny torolàlana dia misy làlana amin'ny sari-tany ho an'ny faritra tsara indrindra hiketana ny seams. Ny harena ankibon'ny tany dia asa fanangonana ary ho an'ny olona maro dia tena mpanao volamena.
Mitrandraka tsara ny Smithy, la injeniera ary ny firavaka.
Haneho fomba haingana hampiakarana ny haavon'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany io, saingy indrisy fa asa miroborobo izy io ary mila fotoana hahatrarana ny haavon'ny 450. Hiezaka ny hanao katalaogy ireo faritra tsara indrindra misy isan'ny teboka betsaka indrindra handavaka.